व्यवसायीक युगमा अपरिहार्य व्यवसायीक ज्ञान – HamroKatha
व्यवसायीक युगमा अपरिहार्य व्यवसायीक ज्ञान
एनई ग्रुपका अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठसँग अन्तरवार्ता
अहिलेको समय भनेको व्यवसायीकको जमाना हो । यसका लागि प्रोफेस्नालिजम मान्छे हायर गर्ने । कन्सल्टेन हायर गर्ने , र त्यो प्रोजेक्ट सम्वन्धि अध्ययन गराएर ठिक छ भन्ने भएपछि तत्काल एउटा टिम बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
हाम्रो कथा २०७५ मंसिर २ गते १६:१७
जो व्यक्तिले व्यवसाय गर्न चाहेको छ या ईच्छा छ या सुरु गर्न लागेको छ । उसले सबैभन्दा पहिला कुन क्षेत्रमा अवसर छ र कुन क्षेत्रमा आफुले हात हाल्यो भने आफु सफलता पाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
डिसिजन गरीसकेपछि तुरुन्तै अब आफु कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारे सोच्नुपर्छ । छिटो निणर्य लिने क्षमताले पनि धेरै सफलता पाउछ । जस्तै कसैले कुनै प्रोजेक्टमा सम्भावना देख्यो भने आफुले तुरुन्तै निणर्य लिएर आगाडि जानुपर्छ ।
बजार सर्वेक्षण दरीलो मात्र काम अघि बढ्न सक्छ
जुन उद्योग गर्न लागेको हो त्यसको बजार सर्वेक्षण गर्नुपर्छ – डिमाण्ड एण्ड सप्लाईको । ग्राहको चाहना बढि के मा छ भनेर हेर्नुपर्छ । आफ्नो माइण्ड क्लेयर बनाउनुपरयो ।
यसपछि अहिलेको समय भनेको व्यवसायीकको जमाना हो । यसका लागि प्रोफेस्नालिजम मान्छे हायर गर्ने । कन्सल्टेन हायर गर्ने , र त्यो प्रोजेक्ट सम्वन्धि अध्ययन गराएर ठिक छ भन्ने भएपछि तत्काल एउटा टिम बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
कसैले पनि अन्धाधुन्ध कुनैपनि व्यवसाय अघि बढाउछु भनेर अघि बढ्यो भने त्यहा धेरै रिक्स हुन्छ । आफुले सबैभन्दा पहिला आफुले अध्ययन गर्नुपर्यो। बजारको अध्ययन गर्नुपर्यो ।
कम्पनीको कल्चर, लगानी र योजनाबारे स्पष्ट हुनु पर्ने बुँदाहरु:
१) पैसा र योजना:- आफुसंग पैसा मात्र भएर पनि हुदैन । योजना नै छैन भने त्यसलाई के मा लगानी गर्ने त्या त स्पष्ट हुनुपर्छ । विना योजना अघि बढे ठूलो रिक्स हुन्छ
२) धैर्यता:- कुनैपनि व्यवसायमा छोटो समयमा कमाउने भन्ने सोच्न हुदैन ।
३) बजार र ब्राण्ड:- आफ्नो बस्तु वा उत्पादनको ब्राण्ड स्थापित गराउनु पर्यो । बजारमा ग्राहकले तपाईले उत्पादन गरेको बस्तु मन पराउन थाल्ने वितिकै सफलता पाउने धेरै सम्भावना हुन्छ । यस्तो भयो भने काम हाम्रो पछि पछि आउछ । हामी कामको पछि लाग्नु पर्दैन ।
४) ठिक समय, ठिक ठाँउ र ठिक व्यक्तिसँगको निर्णय:- सहि समयमा निणर्य लिन सक्नुपर्यो । कुनैपनि व्यवसायलाई सजिलो ढंगले सोच्न हुदैन । आफु पनि मेहनत गर्नुपर्छ । र आफ्नो स्टापलाई पनि मेहनत गर्ने एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ । आफ्नो उत्पादनको गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु हुदैन । यसरी एउटा ब्राण्ड बनिसकेपछि ग्राहकमा त्यो सामान बेच्न कुनै गाह्रो छैन ।
५) रणनीति:- आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरु कसरी अघि बढीरहेका छन भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । र आफु पहिलो नम्वरमा आउन कस्तो गुणस्तर दिनुपर्छ । नयाँ उत्पादन ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ ।
६) समस्त टीमलाई अघि सार्ने:- व्यवसायसंग सम्वन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरु हुन्छ। देश वाहिर वा भित्र । यस्तोमा आफु वा आफन्तलाई मात्र सहभागि गराउने हैन । कम्पनीका अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई पनि सहभागि गराउनुपर्छ । तालिमहरुमा पनि यस्तै अनुसार सहभागि गराउनुपर्छ । कम्पनीभित्रकै स्टाफमा वर्षमा एकपटक पिकनिक ला यस्तै प्रकारका कार्यक्रम राख्नुपर्छ ।
कम्पनीमा एउटा सञ्चालकमात्र भएर सफल हुने हैन । आफ्नो स्टाफ र टिमको पूर्ण रुपमा सहयोग लिनसक्ने बातावरण बनाउनु पर्छ ।
समस्यामा आफु कसरी सभाईभ हुने त ?
समस्या नआउने भन्ने होईन । समस्या आउछन जान्छन । त्यसमा आफु कसरी सभाईभ हुने त ? यसमा चलाखी देखाउनुपर्छ र आफुले निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।
अब समस्या भनेको विभिन्न क्षेत्रबाट आउन सक्छ । मुलुकको परिस्थिति । राजनीतिकअस्थिरता , कामदारका समस्या, बन्द हडताल , कहिलेकाही आफुले सोचे बमोजिम उत्पादन बजारमा विक्रि वितरण पनि नभईरहेको हुनसक्छ । तर जब समस्या आउछ, धैर्य राखेर बस्नुपर्छ । यो समस्या कहाबाट आएको हो र यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्वन्धमा आफु विश्वासिलो आधार तयार गरेर अघि बढ्ने ।
र अर्को महत्वपूर्ण कुरा मानव संसाधन हो । आफ्नो ग्रुप , व्यवसाय भित्र एउटा स्ट्रोङ टिम हुनुपर्छ । व्यवसायीक ढंगले अघि बढ्नुपर्छ ।
(एनई ग्रुपका अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठसंग रोजिना थापाले गरेको कुराकानीमा आधारीत)